HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Hebreo Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Serba Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tiorka Tseky Vietnamianina Xhosa Yorobà
Vaovao Farany: Mampalahelo fa nisy anabavy be taona iray maty noho ny Rivo-doza Harvey.
NEW YORK—Tao Rockport, tanàna amoron-tsiraka any Texas, no tafiditra an-tanety ny Rivo-doza Harvey, tamin’ny zoma 25 Aogositra 2017. Tena nahery vaika izy io, ary na dia nihena aza ny heriny ny alahady taorian’izay, dia mbola nandravarava ny faritra atsimoatsinanan’i Texas ihany ilay izy hatramin’ny alarobia 30 Aogositra. Naharay tatitra vonjimaika ny biraon’ny sampan’i Etazonia, momba ny vokatr’ilay loza eo amin’ireo rahalahy sy anabavy.
Vavolombelona 84 000 eo ho eo no mipetraka ao amin’ilay faritra nandalovan’ny Rivo-doza Harvey. Tsy nisy maty aloha hatreto ireo rahalahy sy anabavintsika. Sivy kosa no naratra ary dimy no niditra hopitaly. Vavolombelona 5 566 koa no tsy maintsy nafindra toerana. Trano 475 nipetrahan’ireo rahalahy no simba be, ary 1 182 kosa no simba kely.
Miezaka manampy an’ireo rahalahiny tra-boina ny Vavolombelona any an-toerana, ka mandrindra an’izany ireo mpiandraikitra ny faritra any Austin sy Dallas ary San Antonio. Rahalahy an-jatony any amin’ireo tanàna ireo no nampiantrano an’ireo tra-boina avy any Houston sy ny morontsirak’i Texas. Nisy kosa nanome sakafo sy rano ary fanampiana hafa, ka nahatratra 300 taonina latsaka izany.—Ohabolana 3:27; Hebreo 13:1, 2.
Nilaza ny mpiandraikitra ny faritra fa efa manomboka miverina amin’ny laoniny ny fivoriana sy ny fandaharana ataon’ny fiangonana rehetra. Mikasa ny hitsidika an’ireo faritra tratran’ny loza ny Komitin’ny Sampan’i Etazonia, mba hampahery sy hanampy an’ireo tra-boina.
Hoy i David Semonian, mpitondra tenin’ny Vavolombelon’i Jehovah: “Tena malahelo an’ireo rehetra mijaly noho ny Rivo-doza Harvey isika, ary misaotra an’izay rehetra nanolo-tena hanampy taorian’iny loza iny. Mivavaka ho an’ireo rahalahy sy anabavy tra-boina isika, sady mankahery azy ireo mba hatoky an’i Jehovah foana satria tena be fitiavana izy sady vonona hanohana ny mpanompony.”—Salamo 55:8, 22; Isaia 33:2; 40:11.